अँध्यारो रातमा रहस्यमय | जिन्दगीको पानाहरु
निस्पट्ट अँध्यारो हावासँग साउती मार्दैछ भने तमोर नदीको चिसो पानी आवाजसँग सम्झौता गरी बग्दैछ कलकल बगरलार्ई चुनौती दिएर । आकाशमा ताराहरू चम्केकै छन् तर प्रकाशले धर्ती अंगाल्न सकेको छैन र त राज जमाउँदै छ अँध्यारो जूनकीरीको मिलिकमिलिकसँग पौठेजोरी खेल्दै ।
रातको मध्यग्रह, चुक पोखिएझैँ अँध्यारोको बर्चस्व, सुनसान नदीको बगर, को हुन सक्छ यतिखेर ? यहाँ नदी तर्दै फेरि बगाउने पानीको प्रवाह पनि छैन । कसैले मलार्ई छक्काउँदैछ भनुँ भने पनि एउटा स्वास्नी मान्छे कसरी सम्भव छ यो ? मनमा कुरा खहरे भएर उर्लदा म जुत्ता लगाउँदै खोल्दै पो गर्दोरहेँछु, उताबाट चिच्याएको आवाजसँग स्वयम् म आफैँ विचलित भएर ।आवाज आइरह्यो म आवाज चपाउँदै मौन भएँ ढुङ्गाको मूर्ति जस्तो कसोकसो निर्जीव बनेर, आवाजले छाएन पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन सोचाइ चुल्ठी परेर लहरिएकै हो । छोयो कसरी भनौँ गएर नदीबाट ती महिलालाई बगरमा ल्याउने बेलासम्म ठिङ्ग खामो झैँ स्थिर छु म ।
करिव दश मिनेट जति पछि जुत्ता त्यहीँ बगरमा फालेर तुफान बनी पुग्छु महिला भएको ठाउँमा, अँध्यारोमा आवाजलाई पच्छ्याउँदै अनुमानको भरमा । छामेर पाखुरा घिसार्दै किनारा तिर ल्याउँछु,उनी अझ सुकसुकाउँदै छिन् ।उनको सुकसुकाइले उनी निकै आपतमा परेकी रैछन् भन्ने लख काट्छु म । ‘चिन्नु न जान्नु घचेटी माग्नु’ अरू समय त्यहाँ रोक्किएर समय खर्चनु थिएन मलार्ई । फरक्क फर्केर सरासर माथि जान्छु जुत्ता मोजा राखेको ठाउँ पत्ता लागेन अँध्यारोमा कता हो कता ।
छामछुम खोजखाज गर्छु केहीबेर, अब खाली खुट्टाले पैताला दर्फराउँदै लाग्नु पर्ला उकालो, व्यर्थै एउटीलाई बचाइ टोपल्न जाने भैखाको नयाँ जुत्ता गुमाउनुप¥यो । गुनासो पोख्छु आफँैलार्ई, उकालो लाग्न थाल्छु बानी भए पो खाली खुट्टाले हिँड्ने, ढुङ्गाका गेगरले बिझाएको आभाष तालुसम्म छ पैतालादेखि ।
“लौन त मैले सोधेँ अब त भन, कहाँ हो तिम्रो घर ?” तपार्ईंको भन्दा पल्लो गाउँ हो मेरो, म गा.वि.स. सचिव अमरनाथकी कान्छी छोरी छायाँदेवी हुँ, हुनसक्छ तपार्ईंंले मलार्ई चिन्नु हुन्न ।”
“तिमीले चाहीँ मलार्ईं चिन्छौ र ?” अँध्यारोको शून्यतालाई थप्पड हिर्काउँदै उनी खिलखिलाएर हाँस्छिन् पाखा पर्वत थकाउँदै, कसोकसो मीठो लाग्छ मलार्ई त्यो हाँसो कतै आफ्नोपन घोलिएझैँ । “नचिनेको मान्छेको जुत्ता पु¥याउन मलार्ई के खाँचो ?” उनी फेरि हासिन् त्यसरी नै ।
“छिः तपार्ईं त असाध्यै सोझो हुनुहुँदो रैछ । श्रावणको भेल त एक्लै तर्ने म चैतमा सुकेको नदी तर्न सकिनँ हुँली त, तपार्ईंलार्ई बोलाएकी नि मैले ।” उनी डाँडा गुन्जिने गरी हाँस्छिन् ।जति जति उनी हाँस्दै जान्छिन् त्यति त्यति मलार्ई उनको सामीप्यता मीठो न्यानो लागेको छ आभाष, अँध्यारोलार्ई चिर्दै नियालेर अनुहार हेर्ने चेष्टा गर्छु एकदम धमिलो देखिन्छ मुहार तैपनि राम्री लाग्छ पूर्णिमाको जून जस्ती । नाक ठोक्किने उकालोमा साथी भेट्दा खुसी नै छु म । नत्र हस्याङ्ग फस्याङ्ग गर्दै एक्लै पो उक्लनु पथ्र्यो उकालो । कमसेकम मुख बोलाऊ त भेटेको छु ।“जाऊँ होला अब त दशभाग उकालोमा दुई भाग पनि कटेको छैन उज्यालै होला जस्तो छ घर पुग्दा ।” उठेर बाटो लाग्दै भन्छु म ।उनी पनि आङ तन्काउँदै पछि लाग्छिन्– “के भो त बल्ल बल्ल घर फर्केको छोरा उज्यालोमा धितमरून्जेल नियाल्नु हुन्छ झन बुबा आमाले ।” च्याप्प समाउँछिन् पछाडिबाट हात, म रोकिन्छु हिंड्दा हिंड्दै ।
“जिउको माया कसलार्ई लाग्दैन र ? माहुरी त आफूलार्ई बचाउने बहानामा सुरक्षा गर्ने निहुँमा मान्छेलार्ई खिलेर मर्छ भने म त मान्छे प्राणी जगतकै सर्वश्रेष्ठ जात, अर्कालार्ई किन त्यसो भन्नु नि घुँडा घुँडा पानीमा बगेर मर्छु भन्दै चिच्यायौ आफू ।”
उनी पाँच वर्षको अबोध बच्चालेझैँ मेरो दुवै हात समातेर उफ्रन थाल्छिन् । कसरी नाइँ भनौँ तर त्यहाँ त जङ्गल नै जङ्गल छ कसरी उसको साथीको घर भयो ? एकमन यसरी सोच्छु भने अर्को मन जागिरको सिलसिलामा गाउँ नफर्केको आठ दश वर्षै भयो म । त्यसको अवधिमा घाँस र पानीको सुविधा खोज्दै कोही बसाइ सरेर आयो होला, तर ………… भीरमा घर बनाएर जग्गा अवादी गरी बस्नु पनि कम कठिनको कुरा होइन । उनको कुरामा विश्वास गरेर सहमति जनाउँदै लाग्छु म उनकै पछिपछि ।
घुँडाघुँडा आउने सिरू काँसलार्ई काइयोले कपालको सिउँदो बनाएझैँ गोरेटो बनाउँदै उनी अघि लागिन् सल्लाका स–साना पोथ्रा पन्छाउँदै म त्यही गोरेटोमा घाँसलार्ई समाउँदै छामछाम छुमछुमको तालमा उनकै पछि लाग्छु । हल्का ओरालो जस्तो कहिले उकालो जस्तो बाटो पार गर्दै अलिकति अगाडि बढेपछि बत्ती बलेको देखिन्छ ।
ढोकाहरू सबै खुल्ला, मगमग फूलको वासना, भुइँमा आँखा तिरमिराउने सुन्दर मार्वलमाथि बिच्छ्याइएको गलैंचा, घरका भित्ताहरू सबै टहटह जूनकोझैँ चमक यस्तो लाग्छ घर स्वयम् चन्द्रलोक हो । हामी भित्र पस्दै गर्दा म सोध्छु उनलार्ई–
डाइनिङ्ग टेबलमा चौरासी व्यञ्जन हामीलाई नै पर्खदै छ, हामी दुई आमने सामने गरी बस्छाँै टेबलमा । खानाको परिकारमाथि दृष्टि लगाउँदै खलखल पसिना छुट्छ मलार्ई त्यहाँ मैले खाना खानु भन्दा खानाले चपाउन थाल्छ टुक्रा टुक्रा बनाउँदै ।
थोरै पिउन नपाउँदै झुमझुम बन्छु म । बसेको कुर्सीबाट उठ्न हम्मे हम्मे पर्छ मलार्ई, आफ्नै दाइने हातको टेको दिएर खुब होसियारी साथ ओच्छ्यानमा पु¥याउँछिन् उनी । जुत्ता मोजा खोलिदिएकी, सर्ट पाइन्ट फुकाली दिएकी कता कताको धमिलो दृश्य हेरिबस्छु म । आधा सपना जस्तो अनि आधा बिपना जस्तो । कोठाको प्रकाश अझ धमिलो हुँदै छ आफूले लगाएको साडी र ब्लाउज खोलेर मसँगै पलङ्गमा पल्टेको देख्छु उनी पनि । थाहा छैन उनका हातहरू मेरो शरीरको कुनकुन अङ्गसम्म स्पर्श गर्न पुग्छन् मलार्ई अझँै अनौठो आनन्द उत्पन्न हुन्छ शरीरभरि तरङ्ग फैलिएर, उनी टाँसिन्छिन् मसँग लपक्क लिसो टाँसिएझैँ त्यसपछि……………… ।
“उमङ्ग ! बाबु ए उमङ्ग बाबु ।” कसैले घचघच्यााउँदै बोलाएको आवाजले झल्यास्स हुन्छु म । बिस्तारै आँखा खोल्छु वारिपारि डोको बोकेका घाँसेहरू झुम्मेर मलार्ई पो घेर्दै रै‘छन् । माथि घरे कान्छी आमा निधार छाम्दै बोल्नु हुन्छ,
खै त हिजो नदीमा भेटेकी महिला ? अनि त्यो भव्यमहल, चौरासी ब्यञ्जन, पेट छाम्छु भोकले आन्द्रा बाउडिएर कुइँय गर्छ । म त नाङ्गै सुतेको थिएँ एकपटक लाज र शरमले पानी पानी बनेर नियाल्छु आफूले आफूलार्ई नै, शरीरमा कपडा जुत्ता ठाउँको ठाउँमा नै छ । गाउँका घाँसे महिलाहरू टुलुटुलु हेरिबस्छन् मलार्ई नै । म के जवाफ दिऊँ के भन्न सक्छु र जुन कुरा मेरो जीवनमा हिजो बेलुका घट्यो यो सब उनीहरूले पत्याउने पनि छैनन् । आफूलार्ई सहज बनाउने प्रयासमा काकी, ठूलीआमालाई हेर्दै बोल्छु म–
मन एक तमास सतहझैँ बन्दै जान्छ, स्तब्ध रहन्छ सोचाइ, बिहानीको कलिलो शिशु किरण लत्पत्त पोत्दै छ डाँडा, पाखा र बुटयानलाई, घामको मायालु स्पर्शमा हेलिएर सुस्त सुस्त बहन्छ हावा, बयली खेलाउँदै रूखका हाँगाहरू । यस्तो लाग्छ राती मेरो जीवनमा घटेको घटनासँग अपरिचित छैनन् उनीहरू । त्यसैले पनि मलार्ई अप्ठेरो लाग्छ उनीहरू सामु आफूलार्ई प्रस्तुत गर्नमा ।
सोचाइको हिमश्रृङ्खलामा पालैपालो हिउँ वर्सिएझैँ थप्पथप्प खस्छ मानसपटलमा, कति राम्री थिई ऊ, उसको हँसाइमा सारङ्गीको धुन गुन्जने थियो, बोलाइमा पियानो, हेराइमा त झन जहर नै पो घोलिने यस्ती आइमाई देखिन आज सम्मको जीवन भोगाइमा । त्यो वनको खोँचमा कहाँ गयो भव्यमहल, यस्तो अनौठो घटना मलार्ई नै किन आइलाग्यो भावनाको छालले निथ्रुक्क भिजाउँदा उकालो कटेर घर आएको पत्तैै भएन मलार्ई ।
आँगनमा खामोझैँ ठिङ्ग उभिएको देख्दा बहिनी खुसीले पुलकित भै छाँद हाल्न आउँछे र पो मलार्ई आफू घर पुगेको आभाष हुन्छ ।
म हेमको कुराले छटपटिन्छु । बसेकै ठाउँमा लगलग काम्छ शरीर । डरलाग्छ भित्रभित्रै त्यही खहरेको भीरको फेदी, तमोर नदीको किनारमा त हो नि उसले मलार्ई लगेकी । के यस्तो पनि हुन्छ मरेको मान्छे कसरी जीवित भएर खोलादेखि मसँगै सवाल गर्दै आई, नाइ यो हुन सक्दैन, फेरि त्यो महल, उसँग बिताएको रात, खलखल पसिना छुट्छ । चारैतिर अँध्यारो देख्छु, मेरो वाक्य बसेर किलकिली झंै अन्तर कुन्तर घुम्छ फुइफुइ । हेम उठेर मलको चपरी फ्याक्न थाल्छ धमाधम, म भने चारैतिर अँध्यारो छ ।
« Internet_Software बालबालिका, यौन शोषण र इन्टरनेट »